Zvekuita nemari yedu yatakachengeta mushure mezororo? | Ehupfumi Zvemari
Zvekuita nemari yedu yatakachengeta mushure mezororo?
Ndiyo nguva isingafadzi yegore kana iwe uchinge waziva kuti zororo rako rapfuura uye unofanirwa kudzokera kune yako yakajairwa rhythm yehupenyu. Mamiriro ezvinhu anoitika maunombomira kufunga nezvenzendo dzawakaita, maawa ari kumahombekombe zuva uchigeza uye izvo zvinonaka zvekudya zvekudya pabhawa rako raunofarira. Inguva yekuonekana nenguva dzese dzakanaka idzo iwe dzawakagara munguva yezhizha. Iwe unenge usina sarudzo asi dzokera pane zvakajairwa tsika uye zvingave zvishoma sei zvakare zvine chekuita nenyika inogara yakaoma kunzwisisa yemari nekudyara.
Iko hakuna imwe nzira iri nani yekudzokera kubasa pane kuronga mari dzako izvozvi. Uye zvakare, ichave iri zano ichauya inobatsira kurega kufunga nezve idzo nguva dzakanaka dzawakararama mukati memavhiki ezororo. Zvinotsanangurwa izvo chinja chip uye wotendeuka kuita kwako kuti kuchengetedza kwako kubatsire. Saka iro rinotevera gore, nemari yakaunganidzwa yakawanikwa, unogona kudzokorora chiitiko kana iwe unogona kutogutsa rwendo irwo nekureba kwawanga uchirota. Chingave chiitiko chakanakisa.
Chero nzira, usatarisira kuti misika yezvemari ive nyore kushanda navo. Nekuti zviripo, izvozvi ivo vakaita senge iwe paunopedzisira wavarega vachienda kuzororo. Nenhau shoma kwazvo maererano neecquities, zvese munyika uye kunze kwemiganhu yedu. Zviri mushure mechiitiko chose apo mari yako ichatofanira kubva kubva zvino zvichienda mberi. Zvese zvinhu kuti zvikure pamwe nekururamisa uye solvency, hauzove nesarudzo kunze kwekutangira kubva matsva mitsara yekuita pamberi pemwaka mutsva wemari. Kunyangwe hazvo zvimwe zvimwe zvemari, zvinosanganisira izvo zvemari yakamisikidzwa kana mamwe mamodheru emari mukudyara.
1 Kudzoka kubva kuzororo: zvekuita?
2 Ndezvipi zvigadzirwa zvaunogona kusarudza?
3 Sanganisa mari yakatarwa nemari inoshanduka
4 Kugadzira yako wega investfolio portfolio
5 Tatarisana nekupera kwegore
Kudzoka kubva kuzororo: zvekuita?
Mushure merwendo rwako rwekudzoka kubva kuzororo uchafanirwa kugadzirisa mashandiro ako ese nenzira kwayo. Asi chinhu chakakosha kwazvo kudzivirira zvaunofarira ndezve ndedzipi nzira dzaunofanira kutanga kutanga munaGunyana uno. Nekuti mukuita, haugone, kuti inguva yakanyanya kutendeseka yerudzi urwu rwekushanda kuti uwedzere zvinhu zvako pasi pekupamhidzira zvakanyanya. Mupfungwa iyi, unogona kugadzirisa yako mari yekudyara zvichibva netarisiro nyowani dzehupfumi dzakagadzirwa munguva ino yenguva.
Iyi inguva yegore umo zvigadzirwa zvakanakisa zvinofanirwa kuongororwa kuti uwane purofiti yakakura. Kunyangwe zvichitora imwe nguva yakati wandei kuita ino zano, asi ichave ichinyatso kukosha, sezvaunozoona mushure memwedzi mishoma. Mushure memazororo inogona kushandiswa kusiyanisa mari dzako. Saka kuti nenzira iyi, nzvimbo dzako dzakachengetedzwa zvirinani kupfuura pakutanga. Takatarisana nechero mamiriro asina kunaka emisika yemari zvakajairika. Chichava chekutanga pane zvese chimwe chezvinangwa zvekutanga kune vese vadiki nevepakati varimari, sezvazviri iwe pachako.
Ndezvipi zvigadzirwa zvaunogona kusarudza?
Zvichava zvakakosha kuti iwe usarudze inoshanduka-shanduka mhando dzekudyara uye izvo zvinogona kuchinjika kune ese mamiriro ezvehupfumi. Zvese mune zvakanaka uye mune zvisingafadzi kune echinyakare investments. Nekuti zviripo, kana mamiriro azvino emari akaratidzirwa nechimwe chinhu, iri nekusagadzikana kwayo kwakakwana kunoita kuti zvive nyore kupinza mhando dzekuchengetedza uko kuchinjika kune ese marudzi ezviitiko mumisika yemakambani inotungamira. Kwete kwete chete akajeka anowedzera, asi zvekare zvakare zvinokuvadza zvakanyanya kune zvaunofarira mumusika wemasheya.
Mupfungwa iyi, imwe yesarudzo dzakanakisa dzauinadzo parizvino inochengetedzwa mari yekudyara. Nekuti mukuita, ivo vanogona kuchinjiswa kune chero mhando mamiriro ehupfumi. Nekuti haisi static kana yekungoita mari. Asi zvinopesana, ivo vari kugara vachivandudzwa uye zvinoenderana nezvinoitika mumisika yemari. Kune zvakawanda zvigadzirwa zvine hunhu izvi zvaunogona kubvumirana panguva ino. Uye zvakare, iwe unayo ivo pasi pemaitiro ese. Kubva ku equities kuenda kune yakamisirwa mari, kuburikidza nepakati mafomati kana kunyange mamwe mafomati kana uchida. Iwe hausi kuzoperevedza pane zvirevo zveichi chakanyatso tsanangurwa chimiro.
Sanganisa mari yakatarwa nemari inoshanduka
Imwe yesarudzo dzinogutsa kwazvo pane zvaunofarira iri kutsvaga yemhando yekudyara iyo inosanganisa ese masisitimu. Iwe une zvakawanda zvaunosarudza kubva. Kubva patemu dhipoziti zvakabatanidzwa kuenzana uye izvo zvinokutendera iwe kuti uvandudze iyo yakaderera purofiti inogadzirwa neizvi zvigadziriso. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuwana kudzoka pane yako mari padyo ne4%. Pasina kubhadhara imwe euro mumaneja emitengo kana kunyange makomisheni. Nezvakanakira kuti iwe uchagara uine mari yako pamwe nepashoma purofiti yekugara kwayo.
Mari yekudyara inotumirawo iyi yakasarudzika modhi yekudyara kuburikidza nemhando dzakasiyana. Ivo vanozivikanwa kwazvo nevashambadzi vadiki nepakati uye zvakare vanokutendera iwe kuti uwane mibairo yakakosha pane kuchengetedza kubva pakutanga. Kune akasiyana mamodheru mune aya mari, kubva pane ine hukasha zvakanyanya kusvika kune yakacheka kudzivirira zvakanyanya. Saka kuti vakwanise kupinzwa basa nechero saver profile. Kunyangwe mune ino kesi iyo njodzi yakanyanya kukwirira sezvo vachigona kuburitsa kurasikirwa chero nguva uye mamiriro. Chero zvazvingaitika, kusanganiswa kweese maviri masystem ekudyara kuchakubatsira iwe zvakanyanya kuchengetedza yako yemari mipiro kubva zvino zvichienda mberi.
Kugadzira yako wega investfolio portfolio
Iwe une imwezve yakasarudzika imwe nzira iyo inosanganisira gadzira yako wega mari. Ndokunge, kugovera mari yako mune zvakasiyana zvemari zvigadzirwa. Asi nerusununguko rwako uye kugadzirisa zvaunoda iwe pachako. Nekudaro, iyi sarudzo iyo iwe yaunofanirwa kutora ichave inoenderana neruzivo rukuru, kwete chete yemari yemisika. Asi zvakare nezve zvigadzirwa zvemari zvinogoneswa pakubvumirana. Kubva kune vane hasha kusvika kune vanozvidzivirira zvakanyanya. Ivo anoshandiswa kune chero mhando zano uye mumhando dzese dzemamiriro ekubatana.
Kugamuchirwa kwerutsigiro mumabasa ako ezuva nezuva kunopa rusununguko rukuru kuitira kuti ugone kugadzira chero zano kubva panguva dzino chaidzo. Nekuti zvirokwazvo, unenge usina miganhu saka unogona kushanda nemhando ipi neipi yezvigadzirwa zvemari. Kunyangwe neyazvinonyanya kukosha kuti misika yezvemari inokupa izvozvi. Iwe unongova iwe chete unofanirwa kusarudza kuti ndeapi akanakira iwe nguva dzese. Kusvika padanho rekuti iwe uchafanirwa kupa imwe nguva kuita kuti aya mashandiro ave akakosha pane yako mari.
Tatarisana nekupera kwegore
Chimwe chezvinangwa zvako zvakakosha paunodzoka kubva kuzororo rako chichava kugadzirira kotara yekupedzisira yegore. Ndiyo imwe yenguva iyo equities ine kuita kwakanyanya kuita. Iyo ichave, nekudaro, ichave iri mukana wakanyanya kunaka kuti iwe utenge zvakanakisa kusarudza masheya ari mumamiriro akanakisa panguva iyoyo. Kwete pasina, iyo yekumhanyisa yekumhanyisa inogona kuve yakareba kupfuura dzimwe nguva dzegore. Kunyangwe iwe uchizoshaya sarudzo kunze kwekutarisa iyo yemusika wekutengesera kupihwa uye wosarudza iwo maitiro anokupa iwe chengetedzo huru kutarisana nechikamu chekupedzisira chegore.
Ichave mari inozogadzirirwa kwenguva pfupi, asi nemhedzisiro inogona kushamisa kwazvo. Chero bedzi misika yepasi rese yemashamba ichikura zvakajairika uye pasina zviitiko zvinogona kushandura zvakanyanya kutungamira kwenzvimbo huru dzepasi rose. Kusvika padanho iwe raunogona kutora mukana we dividend kubhadhara izvo zvinoitika mukati memwedzi mitatu iyi. Iine yakamisikidzwa uye yakasimbiswa inodzoka inosvika ku8% pagore. Zvekuti nenzira iyi, chengetedzo inokunda pamusoro pehumwe hunyanzvi uye hwakakosha kufunga.
Kune rimwe divi, haugone kukanganwa kuti imwe yedzakanakisa nzira dzekudyara ndeye kutora mukana wemabhizinesi mikana anogara achizviratidza. Saka kuti iwe ugone kuita izvi, iwe unenge usina imwe mhinduro pane kuve mune yekushomeka pane dzimwe nguva. Nekuti mukuita, hazvidiwe kuti iwe ugare uine nzvimbo dzakavhurika. Kwete zvishoma. Asi pane izvo, iwe unofanirwa kusanganisa kuvepo kwako mumisika yemari nenguva dzekusavapo. Iri izano rinobatsira kusimudzira mashandiro aunogadzira kubva zvino zvichienda mberi.
Uye pamusoro pezvose, usakanganwa kuisa chero chiyero chekudzivirira pane zvakatengwa. Iko pazvinenge zvichidikanwa kwazvo kuti iwe uremekedze zvinotsigirwa uye zvinopesana mumitemo yakange iri chinhu chako chekuita. Saka kuti iwe uuye uende panguva dzakanakisa kudzivirira zvido zvako semudyari mudiki nepakati. Ndokunge, shure kwezvose, izvo ndezvei nezve. Nekuti zvichave zvine chekuita nezvaunoita mushure mezororo kuitira kuti muyero wemabasa pakupera kwegore kuve pachena. Ehe, iwe uchine nguva yekuiwana. Kunyangwe zvisiri zvekushingirira, kana neapo neapo kudzoka munzira. Icho chinhu chaicho chauchazofanira kutora kubva zvino zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Zvekuita nemari yedu yatakachengeta mushure mezororo?
Ivo vanoyambira nezve kuderera kwehupfumi muUnited States